Gyinae a Misii Bere a Misua​—Sɛ Mɛboa Cambodiafo | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Bere a meyɛ abarimaa
Afe 1985 mu no, mmofra bi fi Cambodia baa me sukuu mu wɔ Columbus, Ohio, U.S.A. Saa bere no na madi mfe du pɛ. Ná mmofra no biako te Borɔfo mmiako mmiako bi. Ɔdrɔdrɔɔ nneɛma bi ma mihuu awurukasɛm a ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu—wɔn a wɔrekunkum wɔn, wɔn a wɔrepirapira wɔn, ne wɔn a wɔreguan. Sɛ meda hɔ anadwo na mmofra no asɛm besi me tirim a, na meretew nisu. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔn sɛ Paradise bi reba na saa bere no wobenyan awufo, nanso na wɔnte me kasa. Saa bere no na meyɛ abarimaa koraa nanso mebɔɔ me tirim pɔw sɛ mesua Cambodia kasa sɛnea ɛbɛyɛ a metumi aka Yehowa ho asɛm akyerɛ me sukuufo. Ná minnim sɛ eyi nyinaa rebɔ kwan bi ama me daakye.
Ná Cambodia kasa yɛ den; mede bɔ so a na awae. Eduu baabi no, na ɛyɛ me sɛ minnyae mpɛ me baabi ntena. Nanso ade a Yehowa bɛyɛ, m’awofo hyɛɛ me nkuran ma meyeree me ho. Akyiri yi me tikyafo ne me mfɛfo sukuufo guan me ho sɛ minsua biribi a ɛbɛma manya adwuma kɛse bi ayɛ daakye. Nanso na nea esi m’ani so ne akwampae adwuma, enti misuaa biribi wɔ sukuu a ɛbɛma manya adwuma bi atwitwa me ho ayɛ akwampae adwuma no. Sɛ mepɔn sukuu a, na me ne akwampaefo kɔ asɛnka. Afei nso meboaa wɔn a na wɔpɛ sɛ wosua Borɔfo kasa. Ná eyi nyinaa rebɛboa me daakye.
Bere a midii mfe 16 no, metee sɛ wɔatew kuw bi a wɔde Cambodia kasa yɛ adesua wɔ Long Beach, California, U.S.A. Enti mekɔɔ hɔ, na misuaa sɛnea yɛkenkan Cambodia kasa. Miwiee sukuu pɛ na mifii akwampae adwuma ase, na mekɔɔ so kaa asɛm no kyerɛ Cambodiafo a wɔtete yɛn mpɔtam hɔ. Bere a midii mfe 18 no, na mepɛ sɛ mitu kɔ Cambodia. Saa bere no nyinaa na ɛhɔ nnwoe, nanso na minim sɛ nnipa bɛyɛ ɔpepem du wɔ Cambodia a wɔntee Ahenni ho asɛmpa no ho hwee. Saa bere no na adawurubɔfo 13 pɛ na ɛwɔ ɔman no mu. Bere a midii mfe 19 no, mekɔɔ Cambodia kɔhwɛɛ hɔ. Mfe abien akyi no, mitu kɔtenaa hɔ. Minyaa adwuma bi twitwaa me ho yɛɛ asɛnka adwuma no. Ná mekyerɛ Borɔfo kasa ase, na ɛtɔ da a na meboa nkurɔfo ma wosua Borɔfo. Edidi mu ara na mihyiaa onuawa bi a ɔne me kura botae koro waree no. Yɛabom ayɛ asɛnka adwuma no, na yɛaboa Cambodiafo pii ma wɔahyira wɔn nkwa so ama Onyankopɔn.
Metumi aka paa sɛ Yehowa ayɛ me ‘koma so ade’ ama me. (Dw. 37:4) Adwuma biara nni hɔ a ɛma akomatɔyam sɛ asɛnka adwuma no. Bɛyɛ mfe 16 ni a mebɛtenaa Cambodia. Seesei adawurubɔfo 13 no abu abɔ ho mpɛn pii ma yɛanya asafo mmiako mmiako 12 ne akuw 4 wɔ ɔman no mu.—Jason Blackwell anom asɛm.